महिनावारीको समयमा रगत कम जान्छ ? – List Khabar
Home / स्वास्थ्य / महिनावारीको समयमा रगत कम जान्छ ?
admin August 19, 2021 स्वास्थ्य Leaveacomment 44 Views
भाद्र १, २०७८ महिनावारी एक प्राकृतिक प्रक्रिया हो, जुन हरेक महिलाको २१ देखि ३५ दिनको बीचमा हुन्छ । महिलाहरूको हार्मोनअनुसार यो प्रक्रिया ४ देखि ६ दिनसम्म रहन्छ । यद्यपि महिनावारी समय र परिस्थितिअनुसार फेरबदल भइरहन्छ । जस्तो कि, शरीर कमजोर हुनु, तनावमा रहनु, एनेमियाजस्ता समस्याबाट ग्रसित हुनु । यिनै कारणले गर्दा कुनै महिना सामान्य रहन्छ भने कुनै महिना राम्रोसँग रगत जाँदैन ।
Previous अठार बर्ष पुगेपछि महिलाको विवाह अनिवार्य गर्न सांसदको माग
Next काठमाडौं उपत्यकावासीलाइ अत्यन्तै जरुरि सूचना, यो मौका नगुमाउनु होला !